Haamaha Kaydinta Shidaalka ee Burburi kara ayaa ah qaab kharash wax ku ool ah oo lagu kaydiyo cabitaannada badan ee ku jira beerta shidaalka ama goob weyn oo lagu keydiyo. La daabulay oo sahlan oo la geyn karo, taangiyadayada jilicsan ayaa ah xulashada ugu habboon ee keydinta shidaalka ku meel gaarka ah d ...
Waxaa badanaa loo yaqaanaa barkinta kaadiheysta ama taangiyada qaabka jiifka ah, boorsooyinkan ayaa wali ah qaab dhaqaale iyo waligeed caan ah oo lagu keydiyo ama lagu daabulo biyaha la cabbo iyo kuwa roobka, ama naaftada iyo shidaalka. Si fudud u laaban oo xoogaa iftiin ah, waxaa loo qaadi karaa meelo cidlo ah oo faaruq ah, ama buuxa marka la isku dhejiyo ...
Haan-dhaqashada Kalluunka Tarpaulin ee loo yaqaan 'PVC' oo aan sun lahayn
Taangiga kalluunka ee loo yaqaan PVC kalluunka kalluunka, dhaqanka ku-meel-gaarka ah, bandhigga kalluunka gaadiidka kalluunka, Naqshadeynta labanlaabka oo leh taageero biibiile PVC Waxaan bixinnaa Nidaamyada Nidaaminta Biyo-celinta Deggan (RAS). Kaluun aad u tiro badan ayey ku soo saari kartaa meel yar, iyadoo yareyneysa isticmaalka dhulka kalluunka ...
Biya-barashada - dalabka oo kordha wuxuu keenaa fursado aad u ballaaran
Warshadaha khudaarta bey’ada ayaa si xawli ah u sii fidayay isla markaana ay u soo baxayeen Maanta, beero-dhaqashada waxay u dhigantaa boqolkiiba 50 kalluunka adduunka laga cuno. Ku tiirsanaanta beero-dhaqashada ayaa la filayaa inay sii socoto inay kororto, dhowr jeerna heerka koritaanka wax soo saarka kale ee hilibka. Ku tiirsanaantan sii kordheysa ee beero-dhaqashada ...